Maankaab.com | Archive | Dhacdooyin/Daraasaad
Home » Archives by category » Dhacdooyin/Daraasaad
Dadka aan go’aannada adag lahayn, kuwa shaqada badan, shakhsiyaadka degen ee farxada badan, ayaa la ogaaday aanay qaadin xannuuno badan oo ay ka mid yihiin faaliga, roomadiisanka iyo macaanka sida daraasad cusub oo khubaro Maraykan ah sameeyeen iftiimisay. Sidoo kale cilmi-baadhistu waxay sheegtay in dadka murugada badan, xaaladooda aanay degenayn, kuwa cadhada badan amma inta […]
4th March 2018 No Comment
Cilmi-badhayaal u dhashay dalka Spain, ayaa sheegay in ay xal u heleen badaarta dad badan oo caalamka ku nool cabasho badan ka muujiyaan, waxaanay sheegeen in ay si kedis ah u heleen hab cusub oo lagu daawayn karo, sababtoo ah waxay sheegeen in unugyada dhiigga cad laga faa’iidaysanaayo, timana ay soo saarayaan. Khubaradan oo ku […]
2nd March 2018 No Comment
Cilmi-badhayaal u dhashay dalalka Ingiriiska iyo Maraykanka, ayaa tilmaamay in daraasad ay sameeyeen ka soo baxday in dadka guran (bidixlayaal) ay xagga dhaqalo kasbashada kaga hooseeyaan 12% dadka iyagu aan guranayn (Midiglayaasha), iyadoo ay meesha taalo qadarka Ilaahay ee ah in qof walba Ilaahay arsaaqo. Daraasad laga qaaday 47,000 qof oo ku nool dalalka Ingiriiska […]
Khubaro u dhalatay dalka Ingiriiska, ayaa iftiimiyey in shaqooyinka loolanka amma aadka u dhibta badan ay maskaxda u fiican yihiin, dadka ka shaqeeyaana aanay waligood asaasaqin. Dhakhaatiirta, garyaqaannada iyo macallimiinta, ayaa la ogaaday in ay yihiin dadka xagga maskaxda ugu awoodda badan bani’aadamka, isla markaana aanay maskaxdoodu gaboobin. Haddaba, daraasadu waxay sheegtay in dadka ka […]
Waa arrin dabiici ah, caafimaadkuna ku jiro in ubadka la ammaano marka ay wax wanaagsan qabtan iyo mar kastaba khubaro badana waxay kula talisa waalidka in ay sidaa sameeyaan, balse waxa hadda soo baxday daraasad laga sameeyey arrintaas oo tilmaantay in haddii ubadka buunbuuninta iyo ammaanta laga badiyo ay keento kibir marka ay koraan la […]
Ubadka naaska la nuujiyo muddo ka badan hal sanno waxay noqdaan qar fahanka maskaxdoodu (IQ) aadu sarreeyo, waxbarashadana way ku fiicnaadaan sida ay soo bandhigtay cilmi-baadhis ay sameeyeen khubaro Brazil u dhalatay. Daraasadan cusub oo lagu baadhay 3,500 ubad ah oo markaas uun dhashay, isla markaana la daba socday ilaa inta ay 30 jir gaadhaayeen, […]
Waxa ay Sumaysay 15 ka mid ah Dumaashiyadeed si ay uga Baxsato Guur Lagu Khasbay
Haweenay u dhalatay dalka Bakistan oo lagu amray in ay guursato nin aanay rabin, ayaa ku kacday fal aad u naxdin badan, kadib markii ay sumaysay 15 nin oo la dhashay ninka loo guuriyey si ay uga baxsato guurka qasabka ah. Aasiya Bibi oo u dhalatay magaalada Mzuaffargarh oo ku taal Gobolka Koonfur Galbeed ee […]
Safarada Gaagaaban ee loogu Baxo Degaannada Miyiga ah amma Xeebta Waxay u Fiican Yihiin Maskaxda
Cilmi-baadhis cusub oo hadda la soo saaray, ayaa sheegty in safarada gaagaaban ee loogu baxo miyiga amma xeebaha waxa ay faa’iido caafimaad u leeyihiin maskaxda qofka. Khubarada daraasadan soo saartay waxay sheegeen in meelaha dhirta cagaaran leh amma xeebta ah ay maskaxda siiyaan deganaan iyo in ay nasasho badan hesho. Waxa cilmi-baadhistan soo jeedisay in […]
Muqaallada uu Osama Bin Laden Isku Madadaalin Jiray oo la Ogaaday
Dhukumantigii 470,000 (Afar boqol iyo toddobaatan kumaad) ee sirdoonka CIA-du sii dayaan oo ku saabsan hoggaamiyihii Al Qaacida, Osama Bin Laden, ayaa shaaciyey siyaabaha uu Osama oo ahaa ninka adduunka loogu baadi-goobka banaa isu madadaalin jiray sida waxyaabaha uu daawan jiray. Dhukumantigan oo Arbacadii toddobaadkan la sii daayey wuxuu sheegay in Osama dawan jiray muqaallada […]
Sucuudiga oo Noqday Dalkii u Dambeeyey ee Haweenka u Ogolaada Kaxaynta Gawaadhida
1st October 2017 No Comment
Boqorka Sucuudiga Boqor Salmaan, ayaa soo saaray digreeto loogu ogolaanaayo haweenka xaqa kaxaynta baabuurta markii u horraysay. Boqor Salmaan waxa uu amar ku bixiyey in la sameeyo qayb Wasaaradeed oo fulisa amarkiisaas sannadka 2018ka. Arrintan ayaa dalka Sucuudiga ka dhigaysa waddankii ugu dambeeyey caalamka ee bixiya liisanka darawalnimo ee haweenka. Ilaa hadda dalka Sucuudiga waa […]